Fianakaviana: antso ho masina
Antso avokoa ny asa ataontsika eo amin'ny fiainana andavanandro fa misy ny antso iombonana ho an'ny olona rehetra dia ny fahamasinana. Manazava ny atao antson'Andriamanitra i P. Justolat Rafaralahimboa:
Manohy hatrany ny katesizin'ny Papa François momba ny zokiolona isika, izay nanomezany fampianarana manokana momba ny antson’Andriamanitra na ny antso ho azy ireo. Izany hoe ny anjara asa manandrify azy ireo ao amin’ny fianakaviana na ny fiaraha-monina. Fanazavana entin'i P Justolat Rafaralahimboa
Adidy lehibe ho antsika ny fiahina ny zokiolona. Ny fahasahiranana misy foana fa tokony atao anton-draharaha mihitsy ny famangiana ray aman-dreny matetika, hoy ny Papa François. "Izay mahavangivangy tian-kavana", hoy ihany koa ny fahendrena malagasy. Catéchèse du Pape François sur la famille, avec P. Justolat Rafaralahmboa.